Xiaomi Mi 9 SE: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Xiaomi Mi 9 SE: Ny marimaritra iraisana vaovao an'ny marika
Xiaomi dia manolotra ny Mi 9s feno ho antsika amin'ity hetsika any Shina ity. Ho fanampin'ny nanolorany ny Mi 9 vaovao, mamela antsika fitaovana bebe kokoa ny marika. Ny iray amin'izy ireo dia ity Xiaomi Mi 9 SE, manaraka ny fizotran'ny taona lasa. Izy io dia finday avo lenta izay mahatratra ny taha afovoany premium. Mitovy amin'ny famolavolana, saingy misy famaritana maotina kely kokoa.
Ny Xiaomi Mi 9 SE koa tonga miaraka fakan-tsary telo aoriana ary sensor misy ny rantsantanana tafiditra ao amin'ny efijery. Na dia ny famaritana azy amin'ny ankapobeny aza dia ny ambany noho ny an'ny maodely teo aloha. Fa ity eo afovoany premium ity dia aseho ho finday avo lenta mahaliana.
Noho izany, natomboka amin'ity tsenan'ny tsena izay nisy fitomboana lehibe tamin'ny taona 2018. Izy io dia manolotra famaritana tsara amin'ny ankapobeny ary famolavolana mitovy amin'ny hitantsika tao amin'ny Mi 9. Ka aseho azy io ho safidy tsara ho an'ireo mpampiasa manana teti-bola ambany.
1 Famaritana Xiaomi Mi 9 SE
2 Xiaomi Mi 9 SE: Xiaomi dia miloka amin'ny antonony antonony
Famaritana Xiaomi Mi 9 SE
Tsy ampoizina ity Xiaomi Mi 9 SE ity amin'ny alalàn'ny voalohany amin'ny tsena ampiasaina Snapdragon 712 ho mpikirakira azy. Hatramin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy. Ka ny marika sinoa dia haingana tamin'io lafiny io. Ny fenitra feno amin'ny telefaona dia:
Famaritana ara-teknika Xiaomi Mi 9 SE
modely Mi 9 SE
Operating System Android 9 Pie miaraka amin'ny MIUI 10
efijery 5.97-inch Super AMOLED miaraka amin'ny famaha Full HD + sy ny tahan'ny 19: 9
Tahiry anatiny 64 / 128 GB
Fakan-tsary aoriana 48 + 8 + 13 MP miaraka amina vava f / 1.8 sy f / 1.2 PDAF ary LED Flash
Fakan-tsary aloha 20 MP
Fitaovana hafa Fampandehanana fantsom-pifandraisana natsangana tao amin'ny efijery NFC face unlock
bateria 3.070 mAh miaraka amina fiampangana haingana
lanja Gramin'ny 155
Ity Xiaomi Mi 9 SE ity dia tonga miaraka amina endrika mitovy amin'ilay zokiny lahy. Na dia amin'ity tranga ity aza dia maodely somary kely kokoa amin'ny resaka habe. Kisary somary kely kokoa, ankoatry ny lanjany ambany noho ny avo. Amin'ity tranga ity dia hitantsika fa ny efijery koa dia mitazona ny ankamaroan'ny anoloana telefaona. Ho fanampin'ny fananana notch amin'ny endrika rano indray mitete eo amin'ny efijery.
Ny sensor sensor dia nampidirina tao anaty efijery ihany koa. Ka tanteraka ny tsaho fa nikasa ny hampiditra azy ao amin'ny aseho eo afovoany. Ao anaty telefaona no ahitantsika fahasamihafana. Samy hafa ny processeur sy ny RAM ary ny fitehirizana fitehirizana. Raha ity Xiaomi Mi 9 SE ity dia tonga miaraka amin'ny RAM 6 GB. Ary koa, amin'ny Snapdragon 712 dia andrasana ny fahombiazan'ny telefaona.
Xiaomi Mi 9 SE: Xiaomi dia miloka amin'ny antonony antonony
Ny fizarana sary dia zavatra tadiavin'ny marika hamafisina amin'ity sehatra ity. Toy ny zokiny lahy, ity Xiaomi Mi 9 SE ity dia tonga miaraka amina fakan-tsary telo. Mizarà singa iraisana amin'ny fakan-tsary avo lenta. Satria manana sensor 586-megapixel Sony IMX48 miaraka amina sensor 8-megapixel faharoa izahay ary sensor 13-megapixel fahatelo. Ka mampanantena hanome fifaliana maro amin'ity sehatra ity izy.
Mazava ho azy, ny faharanitan-tsaina artifisialy dia mipoitra eo amin'ny fitaovana. Amin'ity tranga ity hanatsarana ny fakan-tsary ary hanome anay maody sary fanampiny ao. Raha ny Ny fakan-tsarimihetsika an-tariby dia misy sensor 20 MP tokana. Ao anatin'izany no ananantsika koa ny famohana ny tarehy.
Toy ny maodely hafa, ny Xiaomi Mi 9 SE dia tonga amin'ny Android Pie zanatany izao, miaraka amin'ny MIUI 10 ho toy ny sosona fanaingoana. Amin'ny anao, ny batterie dia 3.070 mAh fahaizana. Izy io koa dia manana famandrihana haingana amin'ity tranga ity. Tsy voalaza momba ny faharetan'ny fahaizan'ny telefaona misaotra azy io.
Toy ny tamin'ny Mi 9, amin'izao fotoana izao Manana ny vidiny izay hananan'ity Xiaomi Mi 9 SE any Shina ity izahay. Fa farafaharatsiny mba hahasoa antsika izy ireo raha ny fahalalana bebe kokoa momba ity fitaovana ity amin'ny resaka vidiny. Na dia mety hanana angon-drakitra misimisy kokoa momba ny vidiny aza isika ary hanomboka any Eropa amin'ny Alahady amin'ny MWC 2019.
Hitanay ny kinova roa amin'ity marika eo afovoan'ny marika ity. Samy manana RAM 6 GB, na dia tsy mitovy aza ny tahiry arakaraka ny kinalan'izy ireo. Ireo no kinova sy vidin'ny Xiaomi Mi 9 SE any Sina:
Ny maodely misy 6/64 GB dia mitentina 1.999 yuan (262 euro amin'ny taha-panakalozana)
Ny kinovan'ny telefaona misy 6/128 GB dia miaraka amin'ny vidiny 2.299 yuan (manodidina ny 302 euro hanovana)
Na dia amin'ny alahady aza isika dia hanana fisalasalana momba ny vidin'izy ireo any Eropa. Fa toy ny mahazatra dia azontsika antenaina izany hiakatra ny vidiny ho an'ireo izay tsy maintsy miova.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi Mi 9 SE: Ny marimaritra iraisana vaovao an'ny marika
Ahoana ny fanarahana ny fampisehoana ny Galaxy S10 sy ny Galaxy Fold
Ny Xiaomi Mi 9 dia ofisialy izao: ny farany avo lenta an'ny marika